Madaxweyne Shariif oo shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Munaasabada Ciidul Fitriga. Soomaalinews.com 19 Aug 12, 06:00
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasadda Ciidul-Fitri-ga, isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay Alle ka baryaan inuu dalka iyo dadka noo badbaadiyo. Hadalkii uu ugu talo galay shacabka ayuu madaxweynuhu ku sheegay in Ciiddan uu waddanku horumar ka sameeyay dhinacyada ammaanka iyo siyaasadda, ayna muhiim tahay in Alle looga mahac celiyo si uu umadda
ugu siyaadiyo. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ciidda uga faa�iideystaan inay is cafiyaan.
�Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meeley joogaanba Ciid Wanaagsan, sanadkaan sanadkiisa inuu Alle nagu gaarsiiyo horumar iyo nabad intaan ka badan, waxaan rajeynayaa inaan si wanaagsan uga faa�ideysano munaabasabadan maadaama aynu gudanay waajibaadkii bisha soon,umadana waxaa laga rabaa iney Alle wadajir u baryaan, niyadoodana isku furaan ayagoo wadajir ugu duceysanaya inuu dalku noo noqdo
nabad� ayuu yiri madaxweynuhu.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa kulan la qaatay saraakiishii hore ee ciidamada qalabka sida oo ka yimid qaaradda Yurub iyo Mareykanka, kuwaas oo ka qeyb qaatay diyaarinta qorshaha ammaanka dalka iyo sidii dib loogu dhisi lahaa ciidamada qalabka sida ee waddanka.
�Saraakiishaan waxey nooga yimaadeen meelo kala duwan oo Mareykanka iyo Yurub ah, waxeyna in muddo ah ku howlanaayeen qorshihii diyaarinta amniga dalka iyo sidii loo xoreyn lahaa waxeyna noogu yimaadeen sidii
qorshahaasi iyo talooyinkii ay soo jeediyeen loo hirgelinlahaa ayadoo hadba aan waafajineyno tabarteenna inta ay la egtahay afarta ma shanta sano ee soo socota�
�Dal aan ciidan laheyn nabad ma naqan karo waxaanna wadnaa inaan dib u dhisno Ciidammadeenna Qalabka Sida khibradda ay saraakiishaan leeyihiinna waan ku kalsoonnahay waxaanna uga mahad celinayaa sida ay
u go�aansadeen iney dalalkii ay ku noolaayeen kasoo tagaan oo ay dalkoodii yimaadaan,taasna waxaa garan kara qof wadani ah�
Taliyihii hore ee ciidamada Asluubta Soomaaliyeed Gen. Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo ka hadlay kulanka cashada ah ayaa madaxweynaha ku amaanay dowrka ay dowladdiisu ku bixisay dib u soo nooleynta ciidamada qalabka
sida iyo waliba isu keenidda saraakiishii hore oo aan dib u kulmin tan iyo burburkii dalka. Wuxuuna codsaday in laga faa�iideysto maskaxda ay bixiyeen saraakiisha.
"waxaanu rajeyneynaa in saraakiisha hada joogta iyo dowladda imaan doonto iney qibradaasi ka faa�ideystaan waanna ku kalsoonahay in la hirgelin doono,waxaanna aad ugu ammaanayaa Dowladda hada jirta sida ay
waqtiga ugu bixisay soo nooleynta Ciidammada qalabka sida iyo isku keenida saraakiishii hore si gaar ah waad ku mahadsantahay Mudane Madaxweyne waxaanna kuu rajeyneynaa inaad dadaalkaaga sii wadid�ayuu
yiri Ismaaciil Axmed Ismaaciil.